Umhla My Pet » 3 Imfihlo Dating kwi Budget Student
ngokuthi Umhla My Pet Staff
3 Imfihlo Dating kwi Budget Student
ukubuyekezwa: Jul. 09 2020 | 2 min ukufunda
Njani ukubonisa umhla wam ube nemali ukuze impahla?
Ifoto ngu RBerteig cc
Lo ngumba ngokucinezela kumzabalazo bonke abafundi zehlabathi emfundo ephakamileyo. Le veki idlulileyo nzima ukuhlawula iphepha yangasese babeyifuna, kwaye likhoboka lam ikofu egrogrisayo ukutshabalalisa isipaji. kanti, kanye njengoko nam andikwazi ukufumana jikelele ngokubaluleka caffeine rhoqo, abafundi andinako ukuzisindisa ngokuya into yokuba sele bazimpula.
Ukuphila kwi mali umfundi akukho lula. Enoba nexesha yinxalenye umsebenzi okanye enye bambalwa banethamsanqa abo inkxaso yemali yabazali babo, kodwa nangoku lidabi eliqhubeka okokoko. Ukuxhathisa ngoLwesihlanu ipizza ebusuku kunzima ngokwaneleyo kodwa kuyenza mandundu, kukho enye into abonakala kuzo zonke iikholeji neeyunivesithi; ukuthandana.
Nangona umtsalane yakho, wakhangela, yinto entle, ukuze ndiwakhumbule umhla yakho iyakuba kudla malini wena intlama. nokuba, kukho ukukhanya ekupheleni kwetonela eninzi. Yinto imini yakho lucky kuba ezi mfihlelo ezintathu kunokukunceda ukubonisa umhla wakho ukuba ungumfundi ev.
Kufuphi nekhaya ... sondela ngokwenene
Ifoto ngu Steve Jurvetson cc
College likhaya lakho kude nekhaya. enyanisweni, ukuba mhlawumbi eyonwabisayo ngaphezu ekhaya yakho yokwenyani. Ngoko ke uya kuba luncedo ezininzi neengcinga umhla enokwenzeka unelungelo zakho zomnwe.
Ubusuku bhanyabhanya ukuze ukutya. Netflix waye ngokoqobo ngenxa kids kwikholeji.
Cook kunye (microwave yokupheka nangoku lwenza!)
Dlala umdlalo ibhodi, amakhadi okanye umdlalo ividiyo
Yakha ingubo Fort kunye. Wonke umntwana entliziyweni, musa asinakuyikhanyela loo nto
Kuba izibini artsy-fartsy, ukwenza wezandla okanye ukupeyinta kunye
Kuthetha nje elula cuddling Kudla ebalulekileyo
Yenza isicwangciso mali
Ifoto ngu ityala & Vicki T cc
Awunayo bafunde yonke into eklasini. Isakhono yocwangciso mali yeyona exabisekileyo kwaye iluncedo kakhulu. Nangona awukwazi uyibeke phantsi elizwe lakho kuya kukunceda ube smart ngemali yakho. Hlala phantsi, ukufumana phandle nosiba nephepha (okanye ngaphezulu ukuba babhenela kwi laptop yakho) kwaye ukuqikelela iindleko zakho zenyanga. Oku kubandakanya ukutya, ukonwatyiswa, eziyimfuneko, abanikezi besikolo, kwaye okona kubalulekileyo nemihla. Zama wabeka phantsi kuphela oko awukwazi kuphila ngaphandle. Okulandelayo, ongeze costys kunye ukufumana iziphumo ezingama kangakanani uyakwazi ukuchitha ngenyanga nganye. Ngoku kufike mngeni; zama Akusayi kuyiwela le mali, kwaye ndidlulise ngaphantsi xa kunokwenzeka. Ngoku kuba njengesithandwa lokwenene, nangoku ukuhlawula ityala kwaye uzive kwaphuka ngokupheleleyo.
Sebenzisa Izibonelelo zakho
Ifoto ngu dougwoods cc
impahla yakho inkulu izibonelelo zakho. Ndiya yayinokusenza sobulumko kuhle kunye nabasebenzi somthi neendevu kodwa mna. Njengoko abafundi siya kuba luncedo ezininzi. Uyazi ukuba ezo ncwadi coupon onaye ekuqaleni konyaka kwaye zingavulwa ukususela? kakuhle, akuhambi zigcwele zizele lokonga imali iimbono umhla ... siyiphaphamele abo umvambo dicsounted nangona. ayipheli apho. Naphi na apho uya khona ukuya esikolweni, Ndiyakuqinisekisa kwiivenkile ezininzi, zokutyela kunye namashishini jikelele kwikhampasi ngezaphulelo yakho ukunika umfundi. Athimbe la mathuba kwaye wonge imali izinto zesikolo, ukutya okuninzi. Kukho lijongene ezininzi, bargains kunye giveaways ngenxa kuphela abafundi. Ukuba ukumkanikazi phetshana okanye ukumkani asinto ukuba neentloni.
Njengoko ezi mfihlelo ezintathu, uya ubunokuxaba. Wena unokuloyisa ihlabathi ukuthandana ngokulula kakhulu kwaye kufuneka imali eseleyo ukubonisa kuba. Ngoko kuphuma aze asithimbe ezinye iintliziyo wonge imali.
Top US Cities for Women Single
Leslie ka-Top Ten Dos ezenziwayo Summer Doggie BELIYO
Yintoni Women Cinga Malunga Xa Usabelana Ngesondo
4 Izizathu A Profile Photo Ngaba Ukuphucula Ukufuna Yakho Love
Ndiya Khangela Umntu Ungathanda – Ngoku kuthweni?